Par Taratra sur 20/02/2021
Fanoherana… korontana izao
Nilaza ny Filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny fanjakana tan-dalàna (HCDDED) fa mila manara-dalàna na ny mpitondra na ny mpanohitra. Misy ny demokrasia eto Madagasikara, fa tsy mbola tonga lafatra. Izay no anitsiana azy sy itenenana ho fanampiana amin’ny fametrahana ny demokrasia tena izy.
Soso-kevitry ny ben’ny Tanàn’Antananarivo Renivohitra (CUA) ny tokony hanaovan’ny solombavambahoaka tatitra eny amin’ny boriborintany nahavoafidy azy. Tsy azo anaovana hetsika ny zari­dainan’Ambahijatovo, izay havadika ho zaridaina botanika. Mba tsy havadika ho politika ny asa rehetra ataon’ ny kaominina.
Vonona hiatrika izay ho trangan-javatra amin’ny hetsiky ny mpanohitra tarihin’ireo solombavambahoaka hanao tatitra eny Ambohijatovo ny mpitandro filaminana eo anivon’ny OMC, handray andraikitra manoloana izay mety ho fanakorontanana amin’ny fandrobana na fanimbana zavatr’olona amin’izany.
Miantso fitoniana mba hitandroana ireo dingana ara-demokratika efa nodiavina ny CFM manoloana ny toe-draharaham-pirenena ankehitriny. Mba tsy hiverenana indray ny krizy, tsy ahitan’ny firenena na ny vahoaka tombontsoa velively. Nisy ny fifanakalozan-kevirtra nataon-dry zereo tamin’ireo hery velona.
Nilaza ny governoran’ny faritra Analamanga fa mila mandray andraikitra na ny mpitondra na ny tomponandrikaitra. Nahoana no nandrasana efa-bolana, ohatra, ny vatsim-pianarana any amin’ny oniversite, Toamasina, tsy naloa? Tsy tokony hampidirina intsony amin’ny politika hidinana an-dalambe ny vahoaka.
Izany rehetra izany, fanambarana ny fanoherana korontana avokoa? Mba tsy ho korontana ny hoe fanoherana…